Diyaaradii EgyptAir oo inay qarax u dhacday looga shakiyay - BBC Somali
Diyaaradii EgyptAir oo inay qarax u dhacday looga shakiyay
Lahaanshaha sawirka AlEX SNOW
Image caption Shirkada Egypt Air
Saraakiisha duulimaadka hawada ee dalka Masar ayaa sheegay inay astaanta waxyaabo qarxa ka dhex heleen haraadiga burburka diyaaraddii rakaabka ee Egyptair ee uu tirsigeedu uu ahaa 804 ee bishii May ku burburtay badda Mediterranean-ka.
Warbixin hordhac oo ay soo saareen guddiga baritaanka ku howlanaa burburka diyaaraddii Egypt Air ayaa ka hadlay waxa laga fili karo, waxaana ay sheegeen in ay heleen cadeymo muujinaya in diyaradaasi lagu soo riday qarax.
Cadeymaha ka soo baxay baritankaasi ayaa haatan loo gudbiyay dacwad ogayaasha taas oo ka dhigan in tani ay tahay baritaan dambiyo dagaal.
Ujeedada dhabta ah ayaa u muuqato in diyaraddaasi ay usoo dhacday falal argagixisanimo .
Baarayaasha ayaanan weli go'aan ka gaarin sababta keentay in diyaaraddu ay burburto.
66-dii qof ee diyaaraddaasi saarneyd ayaa dhintay kaddib markii diyaaradda oo u kala gooshaysay Paris iyo Qaahira ay ku dhacday waqooyiga xeebta badda Masar.